Izitshixo zokukhetha ngokuchanekileyo ixabiso | Ezezimali
Izitshixo zokukhetha ngokuchanekileyo ixabiso
Ukukhethwa kwemarike yemasheya kuxhomekeke kwiimeko ezininzi kwisicwangciso ekufuneka sichazwe ngaphambili iindawo ezivulekileyo kwiimarike zezemali. Iya kuba yinto eyimfuneko kakhulu ukuba awufuni ukuba nenye ingxaki ngemali etyalwe kuba iya kuba yinto eqhelekileyo ukuba abantu abakhubazekileyo bazinze ekusebenzeni kwakho. Ukuba awufuni ukuya kule meko ungafunekiyo ngabatyali zimali abancinci nabaphakathi awuzukukhetha kodwa ukusebenzisa uthotho lweengcebiso ezingathandabuzekiyo eziza kuba luncedo xa ulungiselela imisebenzi yakho kwizabelo.
Ewe kunjalo, kukho ezinye iiparameter ekufuneka usete zona ngalo mzuzu xa ukhetha eyona ilungileyo kwimarike yemasheya ukwenza ukuba inkunzi ifumaneke onalo lolu hlobo lwemisebenzi lunenzuzo. Asiyi kuphakamisa ezininzi, kodwa zonke zibalulekile ukuphucula umsebenzi ngamnye kwimarike yemasheya. Ayothusi into yokuba iyakukunceda uzikhusele kwiintshukumo eziyingozi kakhulu kwiminqweno yakho. Apho ifayile ye- inkalo yobugcisa efanayo, nangona ngaphandle kokulibala uhlalutyo olusisiseko.
Kule meko ngokubanzi, siza kuphakamisa ukusuka ngoku ukuya kwiiparamitha ezimbalwa ekufuneka ujonge kuzo isixa sokukhetha ixabiso. Ngokuqinisekileyo uya kuyilawula ngcono imisebenzi yakho kwiimarike ze-equity. Kunye iintshukumo ezikhuselekileyo Kwaye oko kuya kukubonelela ngokusebenza ngakumbi ukufezekisa eyakho iinjongo Ngokukhawuleza kwaye ezo azikho ezinye ngaphandle kokuba nemali ephezulu kwiakhawunti yakho xa ulungisa izikhundla. Umzekelo, abo sikubhenca apha ngezantsi:
1 Khetha ixabiso: yeyiphi imeko?
2 Iimpawu: ukuqesha ivolumu
3 Izicatshulwa zembali
4 Icandelo elinexabiso
5 Amanani emarike yemasheya
6 Ukwenziwa kweBullish esitokisini
Khetha ixabiso: yeyiphi imeko?
Into esisiseko yokuphumeza esi sicwangciso ifezekiswa ngokuhlalutya imeko apho i-asethi yemali ihamba ngelo xesha. Ngale ndlela, uya kwazi ngokhuseleko olukhulu ukuba lixesha lokuba ungene kwizikhundla zakho okanye, ngokuchaseneyo, kungcono ukulinda ukuze ufumane ithuba leshishini obelilindile ixesha elide. Esi sicwangciso silula kakhulu ukusisebenzisa kwaye kwimizuzu embalwa uya kuyazi ngokuqinisekileyo ukuba ixabiso likwi Ukudodobala, ukunyusa umgangatho okanye mhlawumbi imeko esecaleni. Njengoko niza kwazi kakuhle, kukowesibini kubo apho unamathuba amahle okwenza ulondolozo lwakho lube nenzuzo.
Kungenxa yokuba ukuhamba komthengi Kuyazinyanzela ngokulula kumthengisi. Unamathuba amancinci okuba ungalunganga kwaye ke yeyona ndawo ithambekele kakhulu ekuthengeni kwiimarike ze-equity. Ezi ntlobo zamaxesha azinalo ixesha elichaziweyo kodwa, ngokuchaseneyo, zinokugubungela iinyanga ezimbalwa okanye ziqhubeke ngonaphakade phantsi kweminyaka emininzi apho ukonyuka kuxhaphake khona. Ngaphandle kwento yokuba amanye amaxabiso ancitshisiweyo kumaxabiso abo anokuveliswa anokusetyenziselwa ukukhulisa utyalo-mali ngexabiso elinokhuphiswano olungakumbi kunangaphambili. Ungakulibali ukuba ufuna ukugqiba ngempumelelo yonke imisebenzi kwimarike yemasheya.
Iimpawu: ukuqesha ivolumu
Enye le parameter kwimarike yemasheya yenye yezona zigqibo zokukhetha isindululo sentengiso yesitokhwe. Ayilolize xa sibhekisa kumthamo wentengiso yile nto ibhekisa kwinani lokhuseleko olurhweba ngesabelo kwixesha elinikiweyo. Ngale ndlela, awungekhe ulibale ukuba ivolumu ibonisa umdla wabatyali mali kwisenzo esithile. Kungenxa yokuba, xa kukho umthamo ophakamileyo wesivumelwano kukuba kukho umdla omkhulu kwicala labatyali mali lokuthenga izabelo zakho. Yinto elula kwaye le ikhethekileyo kunye nefanelekileyo yeemarike zentengiso ayinazo iimfihlakalo eziphambili. Ngaphaya kokunye ukuqwalaselwa kobuchwephesha kwaye mhlawumbi nakwindawo yokujonga esisiseko.
Enye yezona zinto zibalulekileyo ngokubhekisele kwinto yokuba umthamo wokuqesha ngulowo unento yokwenza nokufaneleka kwenkampani edwelisiweyo. Oko kukuthi, uyakufumanisa oko equity chips eluhlaza, ezinje ngeSantander, Inditex okanye i-Endesa zezona zinobunzima kwisalathiso njengoko zinemali ephezulu. Ngelixa ngokuchaseneyo, ukhuseleko olunomthamo ophantsi kakhulu wokurhweba lunokudala ngaphezulu kwesinye kwengxaki kutyalo mali. Phakathi kwezinye izizathu kuba uya kuba neengxaki ezininzi kunokuba unqwenela ukungena nokuphuma kwizikhundla zabo, ubuncinci ngexabiso olifunayo.
Kananjalo akufuneki ulibale ukuba yimalini ebekiweyo yexabiso lesitokhwe esihlalutywe. Uyakwazi ukwazi ukuba leliphi elona xabiso liphezulu kunye nelona lincinci ukuze ubone ukuba yeyiphi ekugqibeleni indlela enokuthi ithathe kwiimarike zezabelo. Konke okufuneka ukwenze kukuya kwithebhu yexabiso ukufumana ngokulula ezi datha zibalulekileyo kuhlalutyo oluchanekileyo lotyalo-mali onqwenela ukulwenza lube semthethweni ukusukela ngoku. Akumangalisi ukuba uyakufumana into engaphezulu kwesinye xa usenza esi sicwangciso sotyalo-mali. Ingakumbi ukuba ihamba kunye nohlalutyo olupheleleyo lwe umendo uhamba ngoku.
Kwelinye icala, ungathandabuzi nangaliphi na ixesha ukuba amaxabiso embali zingaphezulu kwesiqwenga solwazi malunga nexesha lakhe elidlulileyo. Inokukunika ulwazi olungaqhelekanga malunga nokuba isitokhwe sinokuziphatha njani kwiinyanga ezimbalwa ezizayo okanye kwiminyaka. Ke ngoko, ungaze ukuthathe kancinci ukuzibophelela kukwazi malunga nento eyenzekileyo ziiasethi zemali ezihlalutywa nguwe. Ukongeza, inokukunika umqondiso malunga nokuntywiliselwa kwenkampani edwelisiweyo. Unokufumana isimanga esingaqhelekanga ongakhange ubenaso ekuqaleni.
Isenokuba yiparameter esisiseko, kodwa kungabalulekanga kangako kunangaphambili esithe sakutyhila kweli nqaku. Amacandelo emarike yemasheya ngala anika olona khokelo lubalulekileyo malunga nokuba le mali yezezimali inokuziphatha njani kwikamva, ewe, hayi kude kakhulu. Umzekelo, ukuba sihlalutya amacandelo emarike yasespain yaseSpain, sinokubona ukuba zeziphi eziqinisekileyo kunye nezizi-bearish. Yi Icebo lokucoca ulwelo olusisiseko ukuhambisa utyalo-mali lwakho ngokusekwe kwiprofayili oyibonakalisileyo ngelo xesha njengomtyali mali omncinci nophakathi. Oko kukuthi, ukuba unoburharha, ukumodareyitha okanye uphakathi.
Kwelinye icala, icandelo elinexabiso lentengiso yesitokhwe linokukunika isikhokelo sentshukumo yokuchaza ixesha lokusebenza. Okanye yintoni enye, ukuba iya kuba njalo elifutshane, eliphakathi okanye elide kuba kwimeko nganye uyakufuna icandelo elahlukileyo ngokuxhomekeka kwiimpawu zalo. Esi sesinye sezona ndlela zilula nezilula onokuzisebenzisa ukusukela ngalo mzuzu. Kuba ayizukufuna ulwazi olugqithisileyo kwiimarike zemali ngokungafaniyo neeparameter ezichazwe ngaphambili.
Amanani emarike yemasheya
Ngaphandle kwamathandabuzo sesona sicwangciso silungileyo sokuqalisa utyalomali ngempumelelo enkulu kunangaphambili. Ngale ndlela, awufanelanga ukulibala ukuba zininzi kwaye zahlukile indalo kwaye unokukhetha ngokuxhomekeke kwiinkqubo ezininzi ezibandakanya uhlalutyo lwabo. Njengamagxalaba entloko, ngamanani iisilingi / imigangatho ephindwe kathathu. Ngelixa kwelinye icala, kubalulekile ukuba wazi ukuba imizekelo yamanani eetshathi zamandulo ayaphindaphindwa amaxesha ngamaxesha. Zininzi kangangoko unokucinga kwasekuqaleni.
Kwelinye icala, ezona zisetyenziswa kakhulu ngabatyali zimali abancinci nabaphakathi yilezo zibonelela ngeempawu zotshintsho kwindlela, amanani entengiso yesitokhwe: amanani emarike yemasheya, igxalaba lekhanda, oonxantathu okanye amanani abuyileyo, phakathi kwezinye ezifanelekileyo ukuba ziphakathi kuhlalutyo lobuchwephesha.
Ukwenziwa kweBullish esitokisini
Enye yezo zinto isentloko yabo bonke abatyali zimali abazihlonelayo yile ibizwa ngokuba unxantathu onyukayo. Yenziwe ngokusisiseko ngomgca wokumelana oxwesileyo kunye nesikhokelo esisebenzayo; Ixabiso lenza ukwanda okuphantsi ngaphakathi konxantathu. Ukubaluleka kwayo kuvela kwinto yokuba ezi ndidi zonxantathu zihlala ziqhekezwa phezulu amaxesha amaninzi.
Njengale, zininzi ezingasetyenziselwa ukuqala ukusebenza kwiimarike ze-equity. Nangona kule meko, eyona ngxaki yakho inkulu kulele yokuba kufuneka kufundwe ngakumbi kolu hlobo lohlalutyo lobuchwephesha. Kwaye kusenokwenzeka ukuba awunayo ngokwakho, kwimeko apho ke awuzukukhetha ngaphandle kokuba uqale kule nkqubo yohlalutyo ukuze ubenakho ukufumana amanye ala manani onokuthi wenze ngawo imali ukuba ibe nenzuzo kunye neziqinisekiso ezinkulu zempumelelo kunokuba ngamanye amacebo kutyalo-mali.
Le nkqubo ingaphakathi kwento eyiyo kanye Uhlalutyo lwetshathi eyinxalenye yohlalutyo lobuchwephesha olufunda ukuhamba kwamaxabiso. La manani enza amaxabiso okhuseleko olucatshulweyo nophindaphindwayo ngamaza athile anika into eyaziwa ngokuba yirathism. Inkqubo edibanise nenxalenye elungileyo yezenzo zabatyali zimali kunye nabalamli bezemali.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Izitshixo zokukhetha ngokuchanekileyo ixabiso
Iintloko kunye nemisila phakathi kwabakhi bemarike yemasheya yaseSpain